LG G2 တွင် EFS ဖိုဒါကိုမည်သို့ Backup လုပ်ရမည်နည်း Androidsis
LG G2၊ EFS (ROOT) ဖိုဒါကိုဘယ်လို Backup လုပ်မလဲ
Francisco Ruiz | | Android Root ပါ, LG, လုံခွုံရေး, လဲ tutorial
နောက်သင်ခန်းစာမှာမင်းကိုသင်ပေးမယ် EFS ဖိုဒါကိုဘယ်လို backup လုပ်မလဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် LG က terminal ကိုအတွက် LG က G2 အားလုံး၎င်း၏မော်ဒယ်များနှင့်မူကွဲ၌တည်၏။
ယုတ္တိနည်းအရ EFS ဖိုင်တွဲ၏မိတ္တူကူးယူရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အောက်ပါတို့ရှိသည် အဆိုပါပြုပြင်ထားသောပြန်လည်ထူထောင်ရေး၏စွန့်ပစ်ခြင်းအတွက် terminal ကိုဖြစ်စေ TWRP သို့မဟုတ် ClockworkMod Recovery ကို.
1 ဘာလို့ EFS folder ကိုငါ backup လုပ်သင့်သလဲ။
2 TWRP မှမည်သို့အရန်ကူးယူရမည်နည်း။
3 ငါ ClockworkMod Recovery မှမည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။
ဘာလို့ EFS folder ကိုငါ backup လုပ်သင့်သလဲ။
ပြီးတာနဲ့ ပြုပြင်ထားသောပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း ဖိုင်တွဲ၏မိတ္တူကူးယူရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် EFS နဲအခြားအရာများထဲမှတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏နံပါတ်ကဲ့သို့ထူးခြား။ မလွှဲပြောင်းနိုင်သောအချက်အလက်များပါဝင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ၏ရေဒီယိုကဲ့သို့အရေးကြီးသောအချက်အလက်များကိုပါ ၀ င်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ IMEI.
ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဒီဟာကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဟာ Rom ကိုပြောင်းလဲဖို့ရည်စူးနေတယ်ဆိုရင်၊ တခါတရံမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်စဉ်တွင် ဒီ All- အရေးကြီးသောဒေတာကိုဆုံးရှုံး နှင့်အခြားအမှုအရာတို့တွင်အကျွန်တော်တို့ကိုရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ် ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု.
ဤအရာကိုထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးထားပါက ပြုပြင်ထားသောပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၏တူညီသောရွေးချယ်စရာအတွက် TWRP Recovery သည် folder တစ်ခုလုံး၏အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်သက်ဆိုင်ရာ option ကိုတွေ့လိမ့်မည် EFS နဲ။ ဒီ option ကိုသွားပြီး execute ပဲလုပ်ရမယ်။ ကျနော်တို့က၏ရွေးချယ်မှုအတွင်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည် Backup ကို.
မင်းရှိရင် TWRP ဗားရှင်းမတိုင်မီ 2.6.3.2 သင်နှင့်အတူတူလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းလိုက်နာရမည် CWM Recovery ကို သင်၏ဗားရှင်းတွင်သင်ရွေးချယ်စရာကိုရှာမတွေ့ပါ Backup ကို EFS နဲ.
ငါ ClockworkMod Recovery မှမည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။
သငျသညျကို install လျှင် CWM Recovery ကို ကြှနျုပျတို့လုပျနိုငျမညျ ဒီ ZIP ကို ​​download လုပ်ပါ mod သို့မဟုတ်aကို install လုပ်ရန်လိုသကဲ့သို့ run ပါ ချက်ပြုတ် rom:
ယခုငါတို့လမ်းကြောင်းအပေါ်ကြောင်းစစ်ဆေးရန်ရှိသည် / sdcard // EFS_Backup / ကျနော်တို့အခန်းကန့်အပေါငျးတို့သဒေတာပါရှိသည်သောသက်ဆိုင်ရာ ZIP ရှိသည် EFS နဲ ကျွန်တော်တို့၏ LG G2.
ဤစစ်ဆေးမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာသောမည်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုမဆိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည် TWRP သို့မဟုတ်ကနေ CWM Recovery ကို.
ယခုငါ zip ၏မိတ္တူကိုသင်၏၌ရှိစေရန်သင့်အားအကြံပေးသည့်အချက်အလက်များကိုအကုန်အစင်ကာကွယ်ရန်ပြီးပြီ PC ဖြစ်နိုင်အဖြစ်မိုcloud်းတိမ်အကောင့်၌ရှိသကဲ့သို့ Dropbox သို့မဟုတ်အလားတူဝန်ဆောင်မှုများ။
အရန်ကူးခြင်းကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက်၊ zip ကို sdcard ထဲသို့ကူးယူပါ နှင့်ထံမှ recovery အဲဒါကိုတစ်ချက်ပြုတ် Rom ဖြစ်သကဲ့သို့ကြောင့် flash ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - ပြင်ဆင်ထားသော Recovery ကို LG G2 တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
ဒေါင်းလုပ် - Recovery မှ flash လုပ်ရန်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G2၊ EFS (ROOT) ဖိုဒါကိုဘယ်လို Backup လုပ်မလဲ
ဆူး (@jose_marzella) ဟုသူကပြောသည်
သူငယ်ချင်း၊ EFS recovery ဖိုင်ကိုဖုန်းမှဖယ်ရှား။ ၎င်းအပြင်ဘက်တွင်သိမ်းဆည်းရန်မည်သည့်ပရိုဂရမ်မှကျွန်ုပ်မတွေ့ပါ။ ၎င်းကို moo recovery တွင်သာတွေ့ရပြီး၎င်းသည်ကောင်းစွာသိမ်းဆည်းခြင်းရှိမရှိကိုမူမသိပါ။ ဘာတွေယူဆောင်လာရမလဲမသိဘူး၊ သွင်းဖို့သာထွက်လာတယ်။ ဆိုလိုတာက၊ ငါဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲ။
Sute (@jose_marzella) ကိုစာပြန်ရန်
Matias "TUTE" Orozco ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ အဲဒါကို S4 တစ်ခုမှာလုပ်ဖို့အသုံးဝင်ပါသလား။
Matias "TUTE" Orozco သို့စာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ rom မီးလင်းပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော့် g2 ဟာကွန်ပြူတာနဲ့ပုံမှန်ဆက်သွယ်မှုမရှိပါဘူး။ efs ဖိုင်တွဲကိုဖျက်ပစ်လို့ရလား။ ကောင်းပြီ, ငါသူ့ကိုဘယ်နေရာမှာမမြင်ရ
Dead Trigger2သည်ဗားရှင်းအသစ်လက်ခံရရှိပြီးခရစ္စမတ်အတွက်အထူးပြင်ဆင်ထားသည်
Magus the Gesture Launcher ကိုယခု download ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ